परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय : पुरानै ढर्रा
रमन पौडेल /अन्नपूर्ण टुडे आइतवार, माघ १६, २०७३ 1214 पटक पढिएको
१८पुस दिउँसो कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरको चौरमा सयौँ विद्यार्थी लामो लाइनमा थिए । दीक्षान्त समारोहका क्रममा तिरेको धरौटी फिर्ता लिन लामबद्ध भीडले परीक्षा नियन्त्रण शाखाको प्रशासनिक स्थिति झल्काइरहेको थियो । टुडे टोली परीक्षा नियन्त्रक केशवराज बाँस्तोलाको कार्यकक्षभित्र प्रवेश गरिरहँदा ढोकामै उनलाई गुनासो सुनाउन पर्खिरहेका थिए, पाँच जना ।
उनको कार्यकक्षभित्रै पुग्दा भने रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका विपिन अधिकारी र गणेश खड्का गुनासो गर्दै थिए, ‘सर, परीक्षाका क्रममा केही गरेको छैन तर किन बिनाकारण दुई वर्षका लागि एक्सपेल भयौं ।’ नियन्त्रक बाँस्तोलाको जवाफ थियो, ‘परीक्षा हलमा केही भएको होला । अहिले केही उपाय छैन ।’ पाटन संयुक्त क्याम्पसमा बीए दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएका खड्का अचानक निष्कासित भएपछि नियन्त्रककहाँ गुनासो पोख्न आइपुगेका थिए । नियन्त्रकको सकारात्मक जवाफ नआएपछि भने उनले शिक्षाध्यक्षकहाँ निवेदन दिएका छन् ।
‘कन्ट्रोलर सा’ब नमस्कार है,’ ढोकैबाट चर्को स्वरमा अभिवादन गर्दै दुई युवा भित्रै गए । र, ‘के छ कन्ट्रोलर सा’ब ?’ भन्दै हात मिलाए । ती युवाले टुडे संवाददातासँग पनि परिचय गरे । हतारिँदै भने, ‘ए सर ! ल ल पत्रकार महोदयलाई चिया ख्वाउनुप¥यो ।’ ‘तपाईंचाहिँ को ?’ प्रश्न खस्न नपाउँदै उत्तर आयो, ‘मचाहिँ ताहाचल क्याम्पसको नेविसंघ अध्यक्ष, रामकृष्ण लामिछाने ।’ त्यतिबेला दिउँसोको २ बजेको थियो । बीच–बीचमा कर्मचारीहरू विभिन्न कागजात लिएर नियन्त्रकको टेबुलमा आइपुग्थे ।
नियन्त्रकसँगको अनौपचारिक संवादको क्रममा ती विद्यार्थी नेता भने सोफामा बसेर बीच–बीचमा अप्रासंगिक कुरा कोट्याइरहन्थे, बेला–बेला अट्टहास हाँस्थे । ‘सर, म वसन्तबहादुर चौधरी । मेरो मार्कसिट,’ संवादकै क्रममा ढोकाबाट चियाउँदै हातमा मार्कसिट बोकेका एक युवक नियन्त्रकसँग भेट्न खोज्दै थिए । विद्यार्थी नेता लामिछानेले नियन्त्रकलाई उछिन्दै भने, ‘ए ए ! अघि शिक्षा मन्त्रालयबाट फोन आएको तपाईंकै हो ?’ मार्कसिट सच्याउन आएका वसन्तलाई नियन्त्रकले केहीबेर बाहिरै रोके ।
वसन्तले ढोकाबाट चियाएपछि बाहिरै पर्खेका अरू केही युवाले पनि ढोकाबाट नियन्त्रकलाई चियाउने क्रम दोहोरिइरह्यो । नियन्त्रक बाँस्तोला भने रिसाउँदै कतै फोन गरे, ‘के हो यार पारा । खै ! ढोकामा पाले ? मान्छेको यत्रो भीड छ । एक जना पाले बस्नु पर्दैन ?’
दिनहुँ दुई हजारको भीड
नियन्त्रकको कार्यकक्ष, जहाँ योजना बनाइन्छ । परीक्षा सम्बन्धी संवेदनशील काम हुन्छ । तर, उचित सुरक्षा छैन । सात लाख विद्यार्थीको केन्द्रका रूपमा चिनिइने नियन्त्रक कक्षको परिदृश्यले नै शैक्षिक र प्रशासनिक अव्यवस्था प्रस्ट्याउँछ । बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक करिब दुई हजार परीक्षार्थी÷सेवाग्राही मार्कसिट, रजिस्ट्रेसन, पुनर्योगलगायत काम लिएर पुग्छन् । मार्कसिट छपाइ, वितरणसम्बन्धी छुट्टै शाखा पनि छ यहाँ । तर, परीक्षार्थीहरू केही न केही समस्या लिएर कोठा नम्बर ९ (मार्कसिट शाखा) को झ्यालमा झुम्मिइरहन्छन् ।
यो भीड मार्कसिट दिन र दीक्षान्तका लागि हो । यो सिजनेबल मात्रै हो । केशवराज बाँंस्तोला, परीक्षा नियन्त्रक, त्रिवि
सोही क्रममा पर्वतका वसन्त पौडेल मार्कसिट लिने शाखाको झ्यालमा भेटिए, जहाँ झण्डै सय सेवाग्राही मार्कसिट लिन पर्खिरहेका थिए । मार्कसिट त्यही कोठाभित्र छापिन्छ र झ्यालबाट वितरण गरिन्छ । झ्यालभित्रैबाट कर्मचारीले चिच्याएर नाम बोलाउँछन् । ‘दुई पटक भयो, एक पटक नाम, अर्को पटक नम्बर बिग्रिएर आयो,’ उत्तीर्ण भएको महिनौँपछि मार्कसिट लिन पुगेका साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्षि भन्दै थिए । त्यही हुलमा मिसिए उनी पनि । वसन्तको गुनासोमा सही थप्दै भने, ‘तँछाडमछाड गर्दै भीडमा बसेर मार्कसिट लिनुपर्ने । त्यसैमाथि बिग्रिएर आउने । यो सरकारी शैली कहिल्यै नसुध्रिने भयो ।’
परीक्षा नियन्त्रक बाँस्तोला भने हरेक परीक्षाको रिजल्ट भएपछि यस्तै भीड लाग्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो भीड सिजनेवल मात्रै हो । रिजल्ट भएपछि मार्कसिट लिने भीड । दीक्षान्तको लागि भीड ।’ स्नातक, स्नातकोत्तरलगायत तहका अन्तिम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि परीक्षार्थीको भीड लाग्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । यसरी लाग्ने भीड धेरैजसो मार्कसिट लिन र सच्याउन आउनेको हुन्छ ।
नियमित कामको सिलसिलामा लाग्ने भीडबाहेक पनि त्रिवि परीक्षा शाखामा हरेक दिन केही न केही गुनासो लिएर परीक्षार्थी आउने क्रम रोकिएको छैन । मार्कसिट र गोप्य शाखामै हुने कामका लागि समेत परीक्षार्थीहरू आफ्नो कार्यकक्षसम्मै आउने गरेको नियन्त्रक बाँस्तोला बताउँछन् ।‘कहिले त हुल बाँधेर आन्दोलन गर्नै आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि प्रत्येक विषयमा पुनर्योगका लागि निवेदन पर्छन् । तर, पुनर्योग, पुनः नतिजा भने एक प्रतिशतको पनि सकारात्मक आउँदैन ।’
हरेक दिन गुनासो आउने गरी कस्तो काम हुन्छ बल्खुमा ? पूर्वनियन्त्रक दयामान कर्माचार्य भने पुरानै शैली विद्यमान रहेको देख्छन् । भन्छन्, ‘काम गर्ने शैली र कर्मचारी पुरानै छन् । कर्मचारीसँग पनि आफ्नै सीमितता छ । नयाँ प्रविधिबाट काम गर्नुपर्छ । कर्मचारी पनि थोरै छन् ।’ हाल जनप्रशासन क्याम्पस रहेको जमलस्थित भवनमा सञ्चालित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ०५४ सालमा बल्खु सरेको थियो ।
त्यहीबेला शुरु गरिएको शैली अझै फेरिन सकेको छैन । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने नेपालको परीक्षा प्रणालीमै खराबी देख्छन् । भन्छन्, ‘जानी/नजानी लेटर ग्रेडिङ सिस्टम त आयो । तर, त्यसको विशेषता फेल/पास हुँदैन । तत्कालै नम्बर पठाउन सक्ने हिसाबले कम्प्युटरको अत्यधिक प्रयोग गर्नुपर्छ, जो भएकै छैन ।’ परीक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गराउनुपर्ने सुझाव छ, डा. कोइरालाको ।
उनका अनुसार मल्टिभर्सिटी डिजाइन लागु गरियो भने परीक्षार्थीहरू एकै ठाउँमा कागजात बनाउन भनेर थुप्रिनु नपर्ने अवस्था आउनेछ । पश्चिमा मुलुकले अभ्यास गरेजस्तै मल्टिभर्सिटी यहाँ पनि लागु गराउन सम्भव भएको उनको सुझाव छ । डा. कोइरालासहितको टोलीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत ‘हाइयर एजुकेसन क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क’समेत बनाएको छ । तर, यस्ता नीतिलाई लागु गर्न निर्णय क्षमताको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् ।
पूर्वनियन्त्रक कर्माचार्य भने काम गर्ने शैली फेरेर मात्रै नहुने र नयाँ प्रविधिसँग ‘अपडेटेड’ कर्मचारी पनि चाहिने बताउँछन् । साथै, फारम भर्ने, मार्कसिट बाँड्नेजस्ता प्राविधिक काम भने क्षेत्रीय कार्यालयबाटै गर्न सकिने उनको सुझाव छ । दुई वर्षअघि कर्माचार्यकै पालामा मार्कसिट वितरण र फारम भर्ने जिम्मा विराटनगर, पोखरालगायत सबै क्षेत्रीय कार्यालयलाई दिने तयारी पनि भएको थियो, कर्मचारी अभावका कारण सफल हुन सकेन । ‘सबै काम बल्खुबाटै गर्न खोज्दा पनि कामको प्रभावकारिता नदेखिएको हो । क्षेत्रीय कार्यालयलाई अझै जिम्मा दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
पछिल्लो समय त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा परीक्षार्थी संख्या बढ्दो भए पनि उत्तीर्ण प्रतिशत भने कम छ । यति झन्झटिलो कि, परीक्षार्थीको एउटै कापी रिजल्ट हुनु अघिसम्म ३/४ पटकसम्म ओहोर–दोहोर हुन्छ । परीक्षा केन्द्रबाट कापी बल्खु ल्याइन्छ । त्यसलाई प्याकिङ गरी जाँच्न पठाइन्छ । जाँच गरिसकेपछि कापी फेरि बल्खुकै सम्बन्धित गोप्य शाखामा संकलन गरिन्छ । यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि समयमा रिजल्ट हुन नसकेको बताउँछन् जानकारहरू ।
पुरानै शैलीमा काम गर्न असहज भएको नियन्त्रक बाँस्तोला पनि स्वीकार्छन् । नयाँ प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको उनको दाबी छ । गत मंसिर मसान्तसम्म ‘डाटा’ स्थानान्तरणको काम सक्ने कार्यतालिका भए पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन । बाँस्तोला भन्छन्, ‘अबको केही महिनामै नयाँ भर्सन लागु गराउनेछौँ । त्यसपछि तपाईंहरूले भीड देख्नुहुने छैन । मार्कसिट ढिलाइ र त्रुटिको समस्या पनि सल्टिनेछ ।’ परीक्षासम्बन्धी अधिकांश काम अनलाइनकै माध्यमबाट गराउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, पहिलेको तुलनामा केही परिवर्तन भएको ठान्छन् बाँस्तोला । पहिले मार्कसिटका लागि १५/२० दिनपछि बोलाउने गरिएकामा अहिले एक सातामै दिने गरिएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका चार वटा भवनमा २५ भन्दा बढी शाखाले अझै काम चुस्त रूपमा गर्न सकेका छैनन् । त्रिविअन्तर्गत एक हजार ८० कलेजबाट हरेक वर्ष आठ लाखले परीक्षा दिन्छन् । यस वर्ष मात्रै एक लाख विद्यार्थी पास भएकोमा ८३ हजार चार सय ‘ट्रान्स्क्रिप्ट’ वितरण भएको बताइएको छ ।
यसअघि ६३ हजार ट्रान्स्क्रिप्ट वितरण भएको थियो । गत भदौमा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिविमा छापा मारेको थियो । त्यसअघि ०७१ सालमै लेखा शाखाबाट अख्तियारले लगेका कागजात अझै फिर्ता गरेको छैन । केही कागजात फिर्ता दिइए पनि माइनुट र केही भौचर भने अझै फिर्ता गरेको छैन ।
मानवअधिकार आयोगको नाममा अर्बौं गोलमाल 12183
प्रदेश पदाधिकारीको तलब : कसको कति ? 11657
लेखापरीक्षण नै गराउँदैन सरकारी निकाय : निगरानीमा पशुपति विकास कोष र पर्यटन बोर्ड 2622
मालदिभ्सको राजनीतिक संकट 1270
लालबाबुको दोस्रो अवतार 2735
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 37733
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 6222
चार लाख घुससहित शाखा अधिकृत पक्राउ 1487
सीसी क्यामेरा प्रयोगबिहिन,बढ्यो सुरक्षा चुनौती 501
कुलमान घिसिङ बने मोबाइलमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने नेपाली 16991